musha nyika dzakabatana WWE Superstars Ronda Rousey Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeMuAmerican muimbi anonyanya kuzivikanwa nezita rezita rezita "Muunganidzi Wemaoko ”. Yedu Ronda Rousey Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kweWWE neMMA Star kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga & nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira, simuka kune mukurumbira nyaya, hukama uye hupenyu hwega. Kunyanya zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hungu, munhu wose anoziva pamusoro pekwanisiro rake kuparadza zvombo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Ronda Rousey's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Ronda Rousey Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Ronda Jean Rousey akazvarwa pazuva re1st raFebruary 1987 muRiverside County, California.
Iye akazvarwa semudiki pane vanasikana vatatu kuna amai vake, AnnMaria DeMars (aimbova World Judo Champion) uye baba Ron Rousey (murwi weUS Army).
Ronda akazvarwa akasiyana, ane umbilical tambo yakavharidzirwa pamutsipa wake iyo yakatungamirira kukanganisa kwakakonzera uropi uye kukanganisa pamakumbo ake ezwi.
Akapotsa afa nekushaikwa kweokisijeni iyo nguva panguva yekuzvarwa kwake. Kukuvadzwa kwetambo dzake dzekutaura kwakamutadzisa kugona kutaura izwi rinonzwisisika kusvikira ave nemakore matanhatu.
Mukati memakore iwayo, Ronda aive nevabereki vake kunyanya amai vake vachimutarisira zvakanyanya kunyangwe mune ake akabatikana madhisheni eJudo.
A positive baba-mwanasikana hukama yakave nesimba rakakura pakuita kuti Ronda ataure, uye kuumba kuzviremekedza kwake. Nehurombo, hukama ihwohwo hwakagara kwenguva pfupi sedambudziko rakamborova mhuri yeRousey.
Baba Vanozviuraya Makore maviri mushure meRonda achitanga kutaura:
Njodzi yakawira pamhuri yaRonda Rousey makore maviri chete mushure mekunge atanga kutaura achiri mudiki.
Panguva yaSledding nevanasikana vake, baba vake Ron vakaita tsaona yakaipisisa yakazoita kuti atyoke musana.
Kupwanya tambo yemuzongoza kwakakonzera kusagadzikana kweropa kwakatadzisa musana wake kupora uye kunotungamira kune mamwe matambudziko, mune ino kesi, kuoma mitezo.
Mushure memamwe makore mashoma, Ron uyo aive achiri kunetsekana kuti azvipore achiongororwazve Bernard-Soulier Syndrome.
Ichi chirwere chisingawanzoitika cheropa. Sezvo zvikwereti zvemuchipatara zvakaunganidzwa, akaudzwa kuti aingova nemakore maviri ekurarama. Ron akatadza kuibata mushure mekunzwa nhau. Neshungu, akafunga kutora hupenyu hwake.
Little Ronda aive 8 apo hanzvadzi dzake dzaive 9 uye 12 zvichiteerana sepanguva yekufa kwababa vavo.
"Ndini zvese zvavaive nazvo," anodaro amai vavo AnnMaria uyo pamwe chete naye Judo basa aifanira kushanda mitatu mabasa kuti vatsigire vanasikana vatatu uye kubhadhara kuwedzera kwezvikwereti.
"Handimbodi kuti ndive munhu wangu vana vasingadi kuzvikudza as amai vavo. " akadaro AnnMaria.
Ronda Rousey Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Kukura, Ronda airatidza zvimwe zvisina hunhu hunhu. Semusikana mudiki, aive anozviti ndeangu tomboy aive nenguva yakaoma kusangana nevamwe vana.
Izvi zvakakonzera kuti Ronda anetseke mukirasi nekudaro achiita kuti amai vake vapindire nekufunga kuti achazodzidziswa dzimba yezvikamu zvekwake zvepuraimari uye zvepamusoro chikoro.
Ndichiri kudzidziswa dzimba, Ronda aive nenguva yekutora chikamu mumitambo. Mutambo wake wekutanga waive kushambira. Akashambira pakati pemakore matanhatu kusvika gumi uye akambokwikwidza kuJr.Olympic timu yekushambira padanho rehurumende.
Kudzidza Judo kubva Mummai Wake:
Ndichiri kurarama hupenyu hwake semwana asina baba, Ronda akafuridzirwa nemukadzi wake wemitambo uyo akazova 7th-degree dema bhandi mubati uye wekutanga mukadzi World Judo Champion muUnited States.
Ronda akafunga zvekusiya yekuvaraidza yekushambira uye akave akaomarara nekutevera tsoka dzaamai vake. Iyi sarudzo yakauya mushure mekunge mai vake AnnMaria vabudirira kunyengetedza mwanasikana wavo anotapira kuti adzidze judo.
As Reports Heavy akambozviisa, Ronda akashandisa dambudziko risingafungidzike rerufu rwababa vake uye amai vake kukurudzira kwavakaita basa ravo rekurwa.
Akatanga judo naamai vake pazera remakore gumi nerimwe uye vakadzidziswa naamai vake kusvika ave nemakore gumi nematatu, iro gore rakapenga akatyora ruoko rwaamai vake netsaona. Pazasi pane vhidhiyo yaRonda Rousey yekutanga nyaya yehupenyu muchidimbu.
Kuvimba kwaRonda kuburikidza naJodo kwakabhadharwa sezvo akazove wediki wediki pazera re17 mumitambo yeOlympic ye2004 muAthens.
Akanga ari mhando yakasarudzika yemumhanyi uyo akahwina ruzhinji mukutenderera kwekutanga nekutumira armbar.
Gore rimwe chetero muna 2004, Ronda akasimudzawo menduru yegoridhe kuWorld Junior Judo Championships muBudapest.
MunaAugust 2008, Rousey akakwikwidzana pa Mitambo yeOlympic ye2008 in Beijing, China. Waizviziva here?… Akave wekutanga muAmerica kuhwina menduru yeOlimpiki muvakadzi veJudo kubvira payakatanga semitambo yeOlympic muna 1992.
Ronda Rousey Biography - Mugwagwa kune Mukurumbira Nhau:
Mushure mekukunda kweOlympic, Rousey akasiya basa kubva kuJudo, nguva yaaive nemakore makumi maviri nerimwe. Mushure mekurega basa, Rousey akaenderera mberi nekuwana basa.
Akagovana studio imba newaaigara naye mukati Venice Beach, California uye akashanda mabasa matatu sebheartender uye waitter waitter kuzvitsigira iye nembwa yake.
Paaishanda sebartender, Rousey akatanga kuenda kuHayastan MMA Academy inotungamirwa naGokor Chivichyan, kwaakadzidzira nevamwe vaizotevera MMA varwi.
Iye airovedza zvakanyanya nevarume vakuru kwaari uye aigara achigumbuka nekuchema paakakandwa uye akatadza kukanda mumwe munhu.
Rousey akamuita musanganiswa wemartial arts kutanga seamateur muna Nyamavhuvhu 6, 2010. Akakunda Hayden Munoz nekutumira nekuda kweArmbar mumasekondi makumi maviri nematatu. Akaenderera mberi nekubudirira mumakwikwi eMMA neavhareji armbar anokunda pasi pemaminetsi maviri.
Kunyangwe mushure mekunge Rousey amuita nyanzvi yakavhenganiswa nemartial arts kutanga munaKurume 27, 2011 uye achiramba achitonga makwikwi akazoita kuti ave Strikeforce Vakadzi Bantamweight Champion.
Kurwisa Vakadzi Chikonzero- UFC:
Akashandura kuita zvechisimba panguva yevamwe vakavhengana muhondo yebasa remakore. Muna 2012, Ronda akazvimirira kuti achirwe nevakadzi kuti vabatanidzwe muUnited Fighting Championship (UFC).
Kurwira kwake kodzero dzevakadzi veUFC kwakabhadharwa paakatora pfungwa yemutungamiri weUFC, Dana White uyo akadzima mutemo. Ronda Rousey saka akazozivikanwa seye 1st Mukadzi kusaina neUFC.
Apo Going Inowana Tough:
Mune rake rechinomwe zita rekuzvidzivirira, Rousey munaNovember 2015 vakatarisana Holly Holm muchiitiko chikuru cheUFC 193. Pasinei nekubhadhara kukuru kwaakaiswa paari, Rousey akashaya kurova Holm pane kutora mhirizhonga kubva kwaari.
Pakutanga kweround yechipiri, Holm akagogodza Rousey kunze nekukanda kukwirira kunouraya kumutsipa. Izvi zvakaunza kupera kwamakore matatu aRousey kutonga semhare.
Mushure memakore akawanda kubva pamutambo, Rousey akadzoka kuzotarisana nemhare Amanda Nunes uyo akamukunda iye neTKO mamiririri 48 chete mukutanga kwekutanga. Rousey akanga asina mhinduro kune Nunes 'yakananga uye yakanyanyisa punch uye shots.
Munguva iyi yekurasikirwa kunotevera, kutsunga uye kuzvitenda kwakaramba kwakaramba kuri maziso eRousey.
Ronda Rousey Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Kumuka Mukurumbira kuburikidza neWWE:
Pakati pemakore 2014 kusvika 2017, Ronda akatanga kugadzira zvishoma nezvishoma muWWE. Kuziva kuti achadaidzwa muWWE, akafunga kutsvaga zita remadunhurirwa.
Iyezvino WWE nickname, "Rowdy", Yakatorwa kubva kunonoka nyanzvi yewrestling"Rowdy”Roddy Piper, waakakumbira mvumo asati ashandisa zita iri.
Muna 2017, Rousey yakasayirwa neWWE panguva yakazara. Dambudziko rake uye gare gare kukunda kwezita reWWE pamusoro pe Alexa Bliss mu2018 akaita kuti ave mukadzi mukuru wevakadzi nyanzvi.
Ronda Rousey Ukama:
Kupedza yakawanda yenguva yake nevamwe vake Mixed Martial Art / UFC vaaishanda navo kupfuura chero ani zvake akatungamira kunzvimbo dzepedyo.
Aya mamiriro ezvinhu iwe paunovandudza manzwiro emumwe munhu nekuti uripo paari nguva dzese.
Rudo Nhau naTimoti DiGorrio:
Mushure mekusangana nekushandisa yakawanda yenguva yake nemumwe waaibata naye wemauto, Timothy DiGorrio mu2012 muLA, Ronda Rousey akatanga kufambidzana naye.
Vakanga vari pamwe chete kwegore vasati vapedza hukama hwavo mu2013 mushure mekunge amubata nekutora mapikicha ake asina kupfeka.
Rudo Nyaya naBrendan Schaub:
Pamusoro pezvo, kubva 2013 kusvika 2014, Ronda zvakare aive nerudo akabatana neakarega basa musanganiswa muartist muimbi, Brendan Schaub. Izvo zvakare hazvina kugara kwenguva refu Brendan akatsigira achimupomera mumashoko ake…
“Anoda mukomana anozotora chigaro chekumashure uye handisi ini. Iye anodawo murume anozoti 'hongu mai, hongu mai.'
Musangano Travis Browne:
Zvino kwakazouya humwe hukama nemurwi weUFC Travis Browne uyo Ronda akazivisa kubatanidzwa kwake mushure mekunyengetedza kudanana pasi pemvura muNew Zealand.
Shiri dzerudo dzakaroora pazuva re28th yaNyamavhuvhu 2017 mudunhu reHawaii inova imba yaBrowne inomiririra).
Ronda Rousey Hupenyu Hwemhuri:
Ronda Rousey ndeyeChirungu, ChiPolish, Trinidadian, uye Venzera. Sekuru vake-sekuru baba vake vaive chizvarwa cheAfro-Venzuelan vanoenda vanonzi Alfred E Waddel. Aive mumwe wevanachiremba vekutanga vatema muNorth America.
Nezve amai vaRonda Rousey:
AnnMaria De Mars akazvarwa musi we 15th waNyamavhuvhu 1958 kuna baba vake, Joseph Arthur Waddell naamai vake Marcella Ann Waddell muchikamu chekurapa cheScott Air Force Base, Illinois, United States.
AnnMaria akatanga kuita judo aine makore gumi nemaviri uye akakwanisa kubudirira kutamba mutambo uye chikoro. Kunyangwe zvake aibatanidzwa mumitambo inodenha yemuviri saJudo, zvaakawana mumutsara wezvedzidzo akauya pamberi pemakore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa kwake.
Waizviziva here?… AnnMaria akapedza koreji pazera remakore gumi nematanhatu, akawana degree rake mubhizinesi pazera ramakore makumi maviri uye akamutorera MBA kubva kuYunivhesiti yeMinnesota muna 16 aine makore makumi maviri nemaviri uye PhD yake muEdigital Psychology makore makumi maviri nemasere apfuura kubva panguva yekunyora.
Amai vaRonda Rousey musikana akaoma anoramba achiremekedzwa kukunda medari yegoridhe mu World Judo Championships mu 1984 World Judo Tournament. Pasi pane mufananidzo waro mushure mokukunda mutambo wakanaka.
Kunyangwe mukukwegura kwake, AnnMaria achiri mushumiri asina simba uye mudzidzisi akazvitsaurira womwanasikana wake.
Senge panguva yekunyora, AnnMaria iri muRuzivo neKutaurirana Technology (ICT) seye tech tech. Iye ndiye muvambi we7th Generation Games, kambani inogadzira mitambo yemavhidhiyo.
Kufambira mberi mushure mekufa kwaRon Rousey:
Mushure mekufa kwemurume wake Ron, AnnMaria akazoroora zvakare injinjiniya yeaerospace kana musayendisiti wedombo- kwete chaiko, asi ndizvo zvinodaidzwa naRonda. Akazozvara mwanasikana wake wechina Julia De Mars uyo anoratidzwa pazasi naamai vake.
Julia De Mars akakurira kuva muchengeti wepachikoro chesekondari yepamutambo uye dzimwe nguva anotora chikamu muUFC kudhinda.
Nezve Ronda Rousey's Sista:
Maria Burns-Ortiz: Mwana wedangwe wekupedzisira Ron Rousey naAnnMaria ndiMaria Burns Ortiz. Iye inyanzvi yeICT, mutori wenhau anokunda mubairo uye munyori wepasi rose anotengesa zvakanyanya.
Maria Burns Ortiz pamwe chete naamai vake mubatanidzwa uye Chief Executive Officer ye7th Generation Games. Akanyora bhuku rakanzi; "Hondo Yangu / Hondo Yenyu" naRonda Rousey.
Iri bhuku raimbove rinotengesa zvakanyanya munyika shanu. Yakave zvakare yakashandurwa mumitauro mipfumbamwe (kusanganisira Mongolian!).
Jennifer Rousey: Iye mudzidzisi wenhoroondo uyo akawana vatenzi vake kubva kuUSC panguva yaaive nemakore 24. Jennifer, kusiyana naMaria naRonda, anorarama hupenyu hwakaderera hwakakosha. Akaroora muna Chikunguru 2014 uye anogara murunyararo nemurume wake.
Ronda Rousey Hupenyu hweMunhu:
Kusvika pakuziva hupenyu hwaRonda Rousey kwaizokubatsira iwe kuti utore mufananidzo wake.
Anogona kuve Anorova murume:
Paanosundidzirwa kumadziro, Ronda ane tsika yakajairwa yekuratidza kutsamwa kwechiso kumeso mushure mezvo kunotevera kurova kwake kwaangave murume kana mukadzi.
Iye anokwanisa kuisa kukakavara kumurume anotamba naye zvakavanzika.
Maererano ne Sporting News; Ronda mumudzimai wake anonzi "Hondo Yangu / Hondo Yenyu. ” akamboburitsa rondedzero yekurova kwaakaita mukomana waaimbodanana naye uyo waakamubata achitora mifananidzo yake isina kupfeka iye asingazive.
“Ndadzima mifananidzo. Ipapo ndakadzima hard drive. Ipapo ndakamirira kuti Snappers McCreepy adzoke kumba achibva kubasa. Ndakamira ndakagwamba kunge chifananidzo mukitchen yake, ndichishatirwa nehasha.
Ndakatanga kutsemura mapfundo angu nekugeda mazino. Ndakamira kwenguva yakareba, kupenga kwandakawana. Makumi mana neshanu maminetsi gare gare, akapinda pamusuwo. Akaona kumeso kwangu ndokuoma ... ” Zvino kwakauya kurohwa.
Ronda Rousey Movie Chokwadi:
Waizviziva here?… Ndichiri kudzidzisa kurwa, Rousey akabvuma kutora vhidhiyo mu "The Expendables 3" (2014). Akatamba seclubclub bouncer yakabatanidzwa kuzobatana neboka revarume. Ronda akaonekwa zvakare mumifananidzo ye2015 Furious 7 uye Entourage.
MunaAugust 2018, Ronda akaita muhutano hwepasi pose Mile 22, nyaya yezve yakakosha simba reCIA rakapihwa basa rekuchengetedza hunokosha hwehungwaru kubva kuboka remagandanga.
Bhaisikopo “Ronda Rousey: Kuputsa Ground”Akapa kusimuka kunoshamisa kwaRonda semhare yechikadzi yekutanga munhoroondo yeUFC. Pakupedzisira, "Kuburikidza neMeso aBaba Vangu”Inoongorora hupenyu uye basa raRonda seOlympic judoka uye MMA superstar.
CHOKWADI KUTI: Thanks for readingwedu Ronda Rousey Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa.